ISIKHIPHU - I-Airbnb
Maraussan, Occitanie, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Armelle
Itholakala ngenhla kwegumbi elingaphansi kwewayini, uzobe unokuthula kuleli kotishi elibukekayo, elisha ngokuphelele. Induduzo yesimanje (i-air conditioning, ishawa yase-Italy, umbhede ongu-1 160 * 200 no-3 imibhede engu-90 * 200, ikhishi elifakiwe) kanye nobuqiniso (imishayo edaluliwe, udonga lwamatshe, uphahla oluphezulu lwe-3.5 m).
I-tropézienne (ithala) izokuvumela ukuthi ukhiphe ukudla kwakho ngaphandle (i-plancha ne-barbecue kagesi).
Uzokwamukelwa ngewayini lesizinda sethu "Les Terres d'Armelle" futhi uzoba nethuba lokuza uzonambitha egumbini elingaphansi elingaphansi nje, ukuvakashela i-cellar futhi ngokunokwenzeka uvakashele izivini.
I-gîte "Le Tire-Bouchon" itholakala enhliziyweni yedolobhana laseMaraussan, imizuzu eyi-15 ukusuka olwandle, imizuzu eyi-10 ukusuka e-Béziers kanye nemizuzu eyi-15 ukusuka emaphandleni. Ngaphansi kwemizuzu emi-2 ngezinyawo, uzothola ibhula, ibhikawozi, i-pizzeria, isitolo esincane segrosa, igobolondo lofudu, umphakeli, umlimi wemakethe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Maraussan namaphethelo